Knowledge – Page2– Popinvdo
တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ဈေးဝယ်နိုင်လာတာ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဈေးနှုန်းတွေလည်း သင့်တင့်ကာ မှာယူရလွယ်ကူပြီး လက်လီဈေးသည်တွေအတွက်လည်း အခွင့်အရေးဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုးဘက်လည်းရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူမှာလိုက်ပြီး ရောက်လာဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ရတာဟာ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေရဲ့ အရသာပါ။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ထားသလိုတွေ မဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာထားတဲ့ ပုံထဲမှာ မော်ဒယ်ဝတ်ပြထားတာ လှနေပေမယ့် ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့အခါ တလွဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးဝယ်လိုက်ရတဲ့ ရှူးဖိနပ်တွေကလည်း ရောက်လာတဲ့အခါ အရုပ်ဖိနပ်သေးလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရှော့ပင်းမောတွေမှာ ကိုယ်တိုင်သွားဝယ်သင့်တယ်လို့ သက်သေပြနေတဲ့ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းက အလွဲအချော်လေးတွေကို …
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံတစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်၊သူ့ရဲ့တကယ့်အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာများနိုင်ပါတယ်။ကဲ အကြိုက်ဆုံးပုံရွေးပြီးပြီလား..? * 1 သင်က နံပါတ် ၁ ပုံကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ရော သင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပါ တန်ဖိုးထားတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။အကူအညီတောင်းရင် ပေးဖို့ ဝန်မလေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့က သင်က အားနာလွယ်တယ်။ကူညီပေးလွယ်လိုက်တာ၊စိတ်ပျော့လိုက်တာလို့ထင်နေပေမဲ့ သူတို့အထင်က မှားယွင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ ကူညီဖေးမမှုတွေကြောင့် သင့်ကိုလည်းတကယ်တန်ဖိုးထားချစ်ခင်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပါပဲ။တစ်ခြားသူတွေက …
ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဝါးမြိုနိုင်ရုံသာမက သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခွန်အားတွေကို စုပ်ယူသွားပြီး သင့်အပေါ်ကို ဆိုးကျိုးတွေအများကြီး သက်ရောက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းမှုတွေိကု တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ခံစားပြီး မြိုသိပ်ပါများလွန်းရင် သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါနော်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဒီလိုတွေ ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး စိတ်လေးကို ခဏအနားပေးလိုက်ပါနော်။ (၁) ထိခိုက်လွယ်မယ် Shutterstock …
အာဏာရ ဖဆပလ အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးအတွက် စီမံကိန်းချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒီစီမံကိန်းတွေထဲက လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဟာ နိုင်ငံ့အတွက်အ သက်သွေးကြောသဖွယ်အရေးပါခဲ့တယ်။မြို့ပြလူဦးရေ တိုးပွားလာတဲ့ စစ်ပြီးခေတ်အတိုင်းအတာအရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်လာရတယ်။ သမာရိုးကျ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေနဲ့ မလုံလောက်တဲ့အတွက် ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အကူညီနဲ့အဲ့ဒီတုန်းက စက်မှု့ လက်မှု့ ဝန်ကြီးဌာနဟာ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးတည်ဆောက်ဖို့ စိုင်းပြင်ရပါတော့တယ်။ ဘီလူးချောင်းလို့ခေါ်တဲ့ မြစ်ငယ်ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးကန်မှာမြစ်ဖျားခံတယ်။ အင်းလေးကန်ဟာ တောင်စွယ်ကြားမှာရှိတဲ့အတွက် ကန်ရဲ့ ရေပြင်ဟာ …
ဗိုလ်​ချုပ်​​ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်​ ​
လွတ်လပ်ရေးနေ့ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ၁၉ ရာစု ‘ တတိယ အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ စစ်ပြီးသောအခါ ! မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်္ဂလိပ် လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည် . . . ၁၉၃၇ ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှာ သီးခြား အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်မြေ ဖြစ်လာပါတယ်. . . ဝန်ကြီးချုပ်မှာ …
ဘဝဦးတည်ချက် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရင် ၂၀၁၉ မှာ ဒီအဆင့် ၆ ဆင့်နဲ့ ရှာဖွေပါ
ဘဝဦးတည်ချက် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရင် ၂၀၁၉ မှာ ဒီအဆင့် ၆ ဆင့်နဲ့ ရှာဖွေပါ ဘဝကို ပြီးပြည့်စုံစေမယ့် ဦးတည်ရာ ပန်းတိုင်ဆိုတာ သင့်မှာ ရှိပါပြီလား။ မရှိသေးရင်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဦး။ ဘဝရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို မတွေ့သေးသူတွေ များစွာရှိနေပါသေးတယ်။ လူအများစုက သူတို့ တကယ် ဝါသနာပါရာ မဟုတ်ဘဲ အခွင့်အရေးရသလောက်သာ နေနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ …
“၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့ ”အောင်စေသတည်း ၁။ မြန်မာသက္ကရ်ာဇ် ၁၃၀၉ ခုနှစ် ပြာသိုလဆုတ် ၉ ရက် (အင်္ဂလိပ် သက္ကရာ် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်) တနင်္ဂနွေနေ့ ကောင်းမြတ်သန့်စင် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော အခါ၌ ဤငါတို့ မြန်မာပြည်သည် လုံးဝ လွတ်လပ်သော …
တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လောကလူသားတွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရုန်းကန်နေကြရတယ်ဆိုတာ အင်မတန် ထင်ရှားတယ်။ စီးပွားရေနဲ့ ရုန်းကန်နေကြတယ်၊ လူမှုရေးနဲ့ ရုန်းကန်နေကြတယ်၊ ပညာရေးနဲ့ ရုန်းကန်နေကြတယ်၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေကြရတယ်။ ထိုရုန်းကန်နေရတဲ့ အခါမှာ အဆင်ပြေတဲ့ အခါရှိသလို … အဆင်မပြေတဲ့ အခါလည်း ရှိတယ်။ အမြဲတမ်း အဆင်ပြေနေတယ်လို့ မရှိနိုင်ဘူး။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို …